‘मिस इको इन्टरनेशनल’ मा नेपालको प्रतिनिधित्व मौनता लामाले गर्ने ! - Nepali Cinema News
Home > Nepali > ‘मिस इको इन्टरनेशनल’ मा नेपालको प्रतिनिधित्व मौनता लामाले गर्ने !
‘मिस इको इन्टरनेशनल’ मा नेपालको प्रतिनिधित्व मौनता लामाले गर्ने !
February 01, 2018 Nepali
ईजिप्टमा हुन गैरहेको अन्तराष्ट्रिय सौन्दर्य प्रतियोगीता ‘मिस इको इन्टरनेशनल २०१८’मा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै मौनता लामा त्यहाँ जाने भएकी छिन् । मिस इकोका लागि अधिकार प्राप्तसंस्था ग्रिन आर्ट मिडियाले बिहिबार एक कार्यक्रमको आयोजना गरी यो कुराको जानकारी गराएको हो ।
उक्त कार्यक्रममा ग्रिन आर्ट मिडियाले लामालाई ‘मिस इको इन्टरनेशनल नेपाल २०१८’को क्राउन समेत पहिराई दिएको छ । लामालाई गत बर्ष मिस इको इन्टरनेशनल जित्न सफल भएकी बिजेता रोनाली अमात्यले ताज पहिराई दिएकी थिईन ।
लाइन्स क्लबअफ काडमाडौका पुर्व अध्यक्ष तथा रोयल इम्पायर होटल बालुवाटारका प्रमुख प्रकास सिं कार्की, कुटुम्ब ब्यण्डका सदस्य राजु महर्जन, गायक तथा र्यापर निणर्य श्रेष्ठ, मिस हेरिटेज नेपाल २०१६ की बिजेता तथा फेसन डिजाइनर मञ्जु बन्जारा ढकाल, मिस युनिभर्समा नेपालको पहिलो सहभागी नग्मा श्रेष्ठ लगायत प्रतियोगीताको जर्ज रहेका थिए ।
८० देशका सुन्दरीहरुले एकसाथ प्रतिस्पर्धा गर्ने मिस ईको ईन्टरनेसनल आगामी अप्रिल १ देखि १५ सम्म इजिप्टमा हुने छ । लामाले ईजिप्टमा ८० देशका सुन्दरीहरु सँग प्रतिस्पर्धा गर्ने छिन् । यस प्रतियोगीतामा लामा नेपालको तर्फबाटचौथो सहभागी हुन् । यस अगाडि यो प्रतियोगीता प्रिन्शा श्रेष्ठ, नग्मा श्रेष्ठ र गतबर्ष रोनाली अमात्यले सहभागीता जनाई सकेका छन् ।
विजेता लामाले नेपालको साँस्कृती झल्काउने पोसाक र देशमा रहेको सांस्कृतीक र प्रर्यटकिय स्थानको पहिचान सहितको डकुमेन्ट्री लिएर प्रतियोगीतामा सहभागीता जनाउने बताइन् ।